NLD ကို အားကိုးလို့ မဖြစ်ကြောင်း ဦးခွန်ထွန်းဦးပြော
ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် NLD ကို အားကိုးလို့ မဖြစ်ကြောင်း ဦးခွန်ထွန်းဦးပြော
ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားတဲ့ ပံပိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုမဲမထည့်ပဲ
ပြည်သူက NLD ကိုပဲမဲထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာ
ရခိုင်နဲ့ရှမ်းမှာ ANP နှင့်ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာ
ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင် ပြည်သူကဘာကြောင့် NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့လည်းသဘောပေါက်ပါ..
May 09, 2016 03:18 AM
အံၾသံမဆံုးျဖစ္ရပါသည္ နေရပ်- အနာဂါတ္အတြက္ရင္ေလးမိသည္ :
တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ (ရခိုင်အပါအဝင် မြို သက် ခမီး ချင်း ဗမာ ကမာန်း စသည်) နေနေ
တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခိုင်တဦး တည်း မပိုင်ပါယင်းဒေသရှိတိုင်းရင်းသားအားလုံး
နိုင်ငံတော်ကိုဦးဆောင်နေသည့် အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် ယင်းဒေသရှိ
ရှိပီး ယင်းတာဝန်ကို NLD ဦးဆောင်သည့်
အစိုးရ လွှတ်တော်မှ ဆောင်ရွက်နေခြင်း
ရှိမှ လူမျိုးစွဲမရှိမှ ငြိမ်းချမ်းရေးအသီးအပွင့်ကို
သို့မဟုတ်ပါက ခေါင်းဆောင်းများကို ဝကွက်
နယ်မြေများမှ ပြည်သူများ(ယင်းအထဲတွင် ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့ပါတီထောက်ခံသူများမှ NLDကိုမဲမပေးခဲ့ပါ)ငြိမ်းချမ်းရေး အေးချမ်းမူ
May 08, 2016 09:27 PM
Khun Tun Oo didn't vote for NLD. He knew former Quasi Government has transferred power to new NLD Government was just overamonth. I don’t know why Khun Tun Oo was saying ethnic minorities’ peoples can’t be relied on NLD Government. If Khun Tun Oo thinks problems of 60 years can be sorting out in withinamonth and then Khun Tun Oo should try negotiating between the Restoration Council of Shan State (RCSS) and the Ta’ang National Liberation Army (TNLA). Both organizations are ethnic Shan and sub-Shan ethnic. Peace and reconciliation between majority Barman peoples and ethnic minority Burmese peoples are not quick fix solution and its long term solution. You must give new Government times and cooperation with Government. You can’t be leader of ethnic Shan peoples if you don’t have vision and understanding on this issue. NLD Government will handle delicately and thoughtfully because it’s sensitive to Military and as well as ethnic minorities’ groups.
ဆန္ဒတွေအ၇မ်းစောနေကြပါလား လပိုင်းရှိသေးသည့်အစိုး၇သစ်ကို အချိနိမပေးဘဲ ဝေဖန်နေကြတယ် ဉီးနှောက်က သုံးပြီး စကားပြောကြပါ
ဉာဏ်မြော်အမြင်ကြီး ဖို့ လို ပါတယ်။
Nld အစိုးရက အခါလည်ကလေး အသက်လောက်တောင်မရှိသေးလို့ အားလုၤး အလိုပြည့်ရအောင် မတတ်နိုင်သေးဘူးလေ
နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကြီးအကျယ် ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ဘေးဒုက္ခ တွေ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေ အကျပ်အတည်းတွေ ရှိနေ တယ် လေ။
May 08, 2016 06:03 AM
NLD ကို မဲေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ :
များ စိတ်ချမ်းသာစွဖြင့် လုပ်ကိုင်ရှာဖွေစား
သောက်အိပ်စက်နိုင်ဖို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်သန်ဖို့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖွံဖြိုးအင်အား တောင့်တင်းဖို့ဒါတွေကို အကောင်
အထည်ဖော်ပေးဖို့ ဖော်နိုင်ဖို့ပါ အတွက်
အလားတူအေးချမ်းနေတဲ့ နယ်ပယ် (ယခုရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်)
များမှာ ဒေသမတည်ငြိမ်အောင် ပြည်သူများ
ဒုက္ခရောက်အောင် မငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်နေသူ မည်သူမဆို မည်သည့်အဖွဲ့စည်း
မဆို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပြည်သူများ
NLD ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ လွှတ်တော်
May 08, 2016 04:36 AM
ဆႏၵေစာပီး အေဝဖန္မေစာပါနဲ့:
အချက်မသိတော့ သားမက်ကို သူခိုးထင်"
ထင်မှား ဆန္ဒစောပီး ဝေဖန်ရေးကို ရှေ့တန်း
May 08, 2016 03:46 AM
May 07, 2016 11:31 PM
ဒီလို တိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကိုင်ပေါင်းစုံ လူပေါင်းစုံ အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံက တယောက်တပေါက်တွေ
May 07, 2016 09:36 PM
တောင်းဆိုနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုထားပါသည်
ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကြပီး အချက်အလက်များခိုင်လုံလျှင် အများကလက်ခံလျှင် တောင်းဆိုမူများ
မည်သည့် နိုင်ငံ၏အစိုးရ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်
May 07, 2016 08:57 PM
လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ နေရပ်- အျမင္က်ယ္ေအာင္စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ :
များက အကြောင်းအရာတခုကို ဆွေးနွေး
ရာမှာ တည်ဆဲဥပဒေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ
ပြုလုပ်နေတာတွေ တဗိုလ်တမင်းဖြစ်ခြင်ရာဖြစ်နေတာတွေကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့နေရာမဟုတ်ပါ
NLD အမတ်များက ကိတ်စတိုင်းကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဖြင့်စဉ်းစား သုံးသတ်ပီးဖြစ်စဉ်အချက်အလက်အပေါ်
အခြေခံကာ ပြည်သူများအကျိုးစီးပွားအတွက် မှန်ကန်သည့်အလုပ်များကို ပြုလုပ်
နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အမတ်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပီး
May 07, 2016 02:27 PM
ေၾသာ္ခက္ရေျခရဲ့:
စည်းစိမ်ကာကွယ်ရေးအတွက် NLD အစိုးရက အစိုးရတာဝန်အရလုပ်နေတာကို မသဲကွဲဖူးနဲ့တူတယ်
တည့်၂ပြောရရင်NLD က အခု အစိုးရဖြစ်သွား တာကို မေ့နေတယ်ထင်တယ်
NLD ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ တပ်မတော်သည်တသားတည်းပါဝင်နေပီး
အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးတဲ့
ထားတဲ့ ရခိုင်ALP က ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အရေးကိုလွှတ်တော်ပြင်ပဆောင်ရွက်နေသလို
ANP ပါတီကလည်း လွှတ်တော်တွင်းကနေ
BB CC DD အဖွဲ့တွေကလည်း
ငါကတော့ BB လူမျိုး
ငါကတော့ CC လူမျိုး
ငါကတော့ DD လူမျိုး
အယူမှားရင် အတွေးမှားတယ် အတွေးမှားရင်
ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေ အမြင်ကျယ်
May 07, 2016 12:48 PM
အခြေအနေတစ်ခုကို အချိန်အခါ မစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပဲ အခုလိုပြောကြားလိုက်ခြင်း အပေါ်မှာ ဘယ်အတိုင်း အတာအထိ တာဝန်ယူနိုင်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဦးခွန်ထွန်းဦး အဖြေပေးနိုင်မလား။ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း ကကော အရင် စစ် အစိုးရလက်ထက်တုန်းကကော အခု အချိန် အထိ လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်မှု စွမ်းရည်များ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ရှိခဲ့ ပါသလဲ၊ ရှိလာနိုင်မှာလည်း။
မိမိလိုချင် တဲ့ အတိုင်းအတာကို မရနိုင်တာနဲ့ ဒီအချက်ကတော့အချက် ကောင်းပဲဆိုပြီး ပြောဆိုလိုက်တာ ဟာ ဆင်ချင်တုံတရားနည်းပါးမှုလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။